Onye oru ahia nke ndi Egypt Lorax Capital Partners kwuputara ego mbu
in ego, North Africa
Lorax Capital Partners Fund (LCP), ụlọ ọrụ ego nke ndị Ijipt guzobere na 2015, ihe dị ka nde US $ 200 nke isi obodo a na-ahụ maka njikwa enyere isi site na Egypt American Enterprise Fund ekwupụtala ego mbụ ya, nnweta nke obere osisi na DSQ Otu.
Qtù DSQ bụ onye ndu kachasị n'etiti iguzosi ike n'ihe na ụgwọ ọrụ ndị na-eweta ngwọta gafee Central Europe, Middle East, na mpaghara Africa (CEMENAP) na-enyere ndị ahịa 45 na ndị ahịa ụwa na mba ụwa aka. Firmlọ ọrụ a nwere obere ụlọ ọrụ abụọ, ya bụ Dsqaures na Lucky, nke Lorax Capital Partners Fund na-etinye ego na ya.
Ebumnuche nke nnukwu ego na-abawanye site na ntinye ego mbụ ha bụ ịkwalite uto nke azụmaahịa ọhụrụ ma nye aka na mgbasawanye akara ụkwụ ala DSQ Group na mpaghara na mba ụwa.
Na mgbakwunye na mmụba isi obodo, Lorax Capital Partners Fund ewerewo nnweta nke obere osisi na Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund, na Algebra Ventures, otu n'ime ndị isi obodo Egypt (VC), na onye nwe ụlọ ọrụ ugbu a na DSQ Otu.
Guzosie ike na 2011, ọ na-enye ndị azụmaahịa njedebe na-akwụsị ma na-akwụghachi ụgwọ ọrụ. Dsquares na-echekwa mmemme ahaziri iche maka azụmaahịa, na-enye njikwa arụmọrụ nke ọrụ nka na azụmaahịa ọ bụla, na-emepụta akụkọ nyocha, ma na-enye nkwado na usoro nke mmepe ọrụ.
Marwan Kenawy, Co-guzobere na CEO nke Dsquares na onye ọrụ gọọmentị mbipụta ndị nchụ nta akụkọ kọwara azụmahịa ahụ sitere na LCP na otu ọ ga - esi wulite ụlọ ọrụ ahụ ma kwado ebumnuche ya ịgbasa. O kwuru, sị:
"The Lcp mmekorita na itinye aka na ego ga enyere Dsquares aka ime ka ndị ahịa ya na atụmatụ ahịa gbasaa na Middle East, Africa, na Europe ma jigide ọnọdụ ya dịka onye ndu ntụkwasị obi na nkwụghachi ụgwọ onye ndu mpaghara ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ngwa Lucky, ewepụtara na 2019 site na DSQ Group bụ igwe eji eme ekwentị nke na-enye ndị ahịa ya ego na ọrụ ego dị mfe. Onye na-ahụ maka ngalaba na onye isi nchịkwa nke Lucky, Momtaz Moussa, kwuru banyere mgbanwe ha na-asị:
“Site n’ibu ụzọ na-enye onyinye n'elu ikpo okwu, Kechioma e digitizing ya ọrụ 'azụmahịa azụmahịa. Anyị na-eji data a iji nye ahụmịhe na-adaba adaba ka ịzụrụ yana yana ịchekwa ego na nkwụnye ụgwọ. Oke nghọta a nke omume onye ọrụ na-enyere anyị aka ugbu a iwebata ngwaahịa ngwaahịa nke ọtụtụ ndị ọrụ anyị agaghị enwe ike ịnweta. ”
Atụmatụ mgbasawanye nke DSQ
The ego si Lcp ga-eme ka atụmatụ mgbasawanye otu a gafee mpaghara CEMENAP.
Dsquares na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mpaghara azụmahịa dịka telecom, ụlọ akụ, ngwa ahịa na-ebu ngwa ngwa (FMCG), mmanụ na gas, na ụlọ ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere netwọk ndị ahịa na-akọ banyere ụdị 900 na ihe karịrị 11000 na Egypt, Kenya, Tanzania, Morocco, Jordan, Romania, KSA, na UAE.
Kechioma na nke ya agbanyela ihe karịrị nde nde ise maka ngwa mkpanaka ya. Ikpo okwu a bụ ọtụtụ puku ndị ahịa ndị nọ na ụlọ ọrụ maka ntụrụndụ, iri nri, ejiji, ile ọbịa elektrọnik, arịa ụlọ, ahụike, ngwa ụlọ, wdg.
Ayman Essawy, Co-guzobere na COO nke Dsquares ka ekwuputara na-ekwu na Lucky emeela ka atụmatụ mgbasawanye DSQ Group kwalite ngwa ngwa maka ọganiihu ya, nyochaghachi
“Kechioma na-aga n’ihu inwe nnukwu ihe ịga nke ọma n’ịdọta ndị ọrụ ọhụụ yana ịbawanye njikọ aka nke ndị ọrụ dị adị. Egypt bụ ahịa mbụ anyị ma anyị nwere atụmatụ iji gbasaa ọrụ anyị gafee ahịa ndị dị mkpa na Middle East & Africa. Anyị kwenyere na mmekọrịta a na LCP ga-etinye ma Dsquares & Lucky ihu ọma n'ụzọ dị mma iji mezuo ebumnuche ha n'ọdịnihu.